Computers, once uponatime
WAI LIN KO
ကွန်ပျုတာသမိုင်းကြောင်းလေး မှတ်ထားသမျှ၊ ရှာတွေ့သမျှလေးပါ။
ပထမဆုံး elctronic computer ကို အမေရိကန်ပြန်ထောင်စု၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Institute for Advanced Study (IAS) ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စက်ကို von Neuman machine လို့လဲ တချို့ကသိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီစက်ကို IAS နဲ့ Priceton University က သချာင်္ပါမောက္ခဖြစ်တဲ့ John von Neumann ကဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့လို့ပါ။ ဒီ computer ကို သူ့ရဲ့ကြီးကြပ်မှူအောက်မှာပဲ ၁၉၄၅ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေ ၁၉၅၁ လောက်ထိတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကွန်ပျုတာလောင်းလျာ IAS Machines တွေဟာ computeing ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီ တွေဆိုကိုရောက်ကုန်တော့တာပါပဲ။ အောက်ကပုံကတော့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်က Research ANd Development (RAND) Corporation ကသုံးခဲ့တဲ့ JOHNNIAC လို့ခေါ်တဲ့ IAS machine ပုံပါ။ ၁၉၅၅ နှစ်အမှာ အဲဒီစက်ရဲ့မှတ်ဥာဏ် (Memory) ကို 12k-word အထိမတိုးခင် အဲဒီစက်ရဲ့ memory ပမာဏဟာ 4k-word ပါတဲ့။
တနှစ်ထဲ စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလမှာတည်ဆောင်ကခဲ့တဲ့ International Business Machines (IBM) ရဲ့ computer system ပါ။ ဒီ SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) လို့ခေါ်တဲ့ computer ကြီးဟာ ဆိုဗီယက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေကိုရေဒါစနစ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ထားတဲ့ အလိုအလျောက်လေကြောင်းခုခံမှုစနစ်တခုပါပဲ။ အဲဒီ စက်ကြီးရဲ့အလေးချိန်ကတော့ တန် ၃၀၀ လောက်လေးပြီး တထပ်တိုက်လေးတစ်လုံးစာလောက်တော့နေရယူပါသတဲ့။ အဲဒီစက်ကြီးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ရှိပါကြောင်း။ ဒီစက်ကြီးကိုအောက်ကပုံမှာအတိုင်းတွေ့ရတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားတွေကိုတော့ သတိရမိသား။ နောက်တခု ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးမိတာက စစ်ကြီးကလဲမဖြစ်ခဲ့၊ ဆိုဗီယက်တွေကလဲဗုံးလာမကြဲဆိုတော့ ဒီစက်ကြီးသုံးရတာမတန်မလိုလို။
ဒီမှာချန်ထားလို့မရတာက စက်ပစ္စည်းတီထွင် ထုတ်လုပ်မှုမှာနောက်ကျနောက်ကျလေ့မရှိတဲ့ ကိုနိပွန်ဂျပန်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာပါ။ Made in Japan ကွန်ပျူတာတွေကို Nippon Electric Company(NEC) က ၁၉၅၅ ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကတည်းက ဂျပန်တွေရဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေလို့ ဒီကွန်ပျူတာတွေလဲ စီးရီးလေးတွေနဲ့ထုတ်နေခဲ့ကြပါပြီ။ အောက်ကပုံကတော့ ၁၉၅၉ ခုနှစ်က Nippon Electric Automatic Computer (NEAC) 2203 စီးရီးပုံပါ။ ဒီကွန်ပျူတာကိုတော့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ တော်တော်လေးတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာတော့ ကွန်ပျုတာထုတ်လုပ်မှုမှာ ဂုရုတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ IBM ကနေ IBM 7030 Stretch လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အကျယ်အ၀န်အတွက် အိမ်ခန်းတစ်ခုစာလောက်နေရာယူပြီး တွက်ချက်မှုတစ်ခုအတွက် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုယူနေရတဲ့အဲဒီအချိန်မှာ IBM 7030 Stretch ကတော့ စူပါကွန်ပျူတာပါပဲ။ နေရာကတော့အခန်းတစ်ခုစာယူနေဆဲပဲဆိုပေမယ့် ဒီကွန်ပျုတာဟာ တွက်ချက်မှုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Los Alamos National Laboratory ကနေပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃.၅ မီလီယံ အကုန်ကျခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီကွန်ပျူတာဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကနေပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး ကွန်ပျူတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ IBM 7030 Stretch ဆီကနေ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးကွန်ပျူတာဘွဲ့ကို လွဲပြောင်းယူလိုက်တာကတော့ Noted Computer ကနေဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့ CDC 6600 (Control Data Corporation’s 6600) ပါ။ IBM 7030 Stretch ထက်အလုပ်လုပ်နိုင်နှုန်း ၃ ဆမြန်တဲ့ ဒီကွန်ပျူတာကို ပထမဆုံး စူပါကွန်ပျူတာလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ CDC 7600 ကသူ့ရဲ့ အမွေအနှစ်ကို ဆက်ခံချိန် ၁၉၆၉ ခုနှစ် အထိပေါ့။ ဘယ်အချိန်မျိုးဆက်ပြတ်သွားသလဲဆိုတာတော့ ရှာဖတ်နေတုန်း။
၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ ဒီစက်ကိုတော့ ကွန်ပျူတာလို့ခေါ်ရမှာခက်,ခက်ခက်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ The Honeywell Kitchen Computer လို့ခေါ်တဲ့စက်တွေကို ဈေးအ၀ယ်အရောင်းဖြတ်ပိုင်းရေးဖို့နေရာမှာ သုံးဖို့ထုတ်ထားလို့ပါ။ Honeywell International, Inc ကထုတ်ပြီး Neiman Marcus လို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးအုပ်စုကနေ မိတ်ဆတ်ပေးတဲ့ ဒီစက်တွေဟာ ပေါင် ၁၀၀ ကျော်ကျော်လေးပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀,၆၀၀ တန်ပါသတဲ့။ အဲဒီစက်တွေထဲမှာ အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ရောင်းဝယ်လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းအနည်းငယ်ပါတဲ့အပြင် အဲဒီဖြတ်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပေးမယ့် စက္ကူဖြတ်စက်လဲတပ်ဆင်ထားပြီးသားပါ။ တကယ်မလွယ်ကူတဲ့အပိုင်းကတော့ အသုံးပြုတဲ့သူတွေဟာ အရောင်းအ၀ယ်အချက်အလက်တွေကိုရိုက်ထည့်တဲ့နေရာမှာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအတွက် ခလုတ်တွေဟာ ကွန်ပျူတာသာနားလည်နိုင်မယ့် Binary ခလုတ် တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ Binary တန်ဖိုးနှစ်ခု ဖြစ်သော o နှင့် ၁ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သော တန်ဖိုးများကိုသာ ကွန်ပျူတာနားလည်သည်။တစ်ခုရှိတာက ဒီလို စိတ်ကူးဆန်းအတွေးသစ်နဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ စက်တွေဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာ တစ်လုံးတစ်လေတောင်ရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မှတ်တမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ပန်းသီးရောင်းတဲ့ လူတွေကိုလဲမေ့ထားလို့မရပါ။ Apple 1 လို့ခေါ်တဲ့ ပထမဆုံး Apple ကွန်ပျူတာကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ တီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာက အခု Apple Inc ရဲ့တွဲဖတ်တည်ထောင်သူဖြစ်လာမယ့် Steve Wozniak။ အဲဒီတုန်းက Steve Wozniak ဟာ သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပဲ တီထွင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Apple အကြောင်းပြောရင်ချန်ထားလို့မရတဲ့ Steve Wozniak ရဲ့သူငယ်ချင်း Steve Jobs ကသူ့ကို Apple 1 ကွန်ပျူတာတွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Apple 1 ကွန်ပျူတာတွေကို ဈေးကွက်ထဲကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၆၆.၆၆ နဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်။ ဘာလို့ ဒီတန်ဖိုးဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ Steve Wozniak ကအဲဒီလို နံပါတ်တွေ ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်တာကိုသဘောကျလို့ပါတဲ့။ သင်သာ ရှာရှာဖွေဖွေပစ္စည်းစုဆောင်းသူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုချိန် ကမ္ဘာတလွှားမှာ Apple 1 ကွန်ပျူတာအလုံး ၃၀ ကနေ ၅၀ အတွင်းရှာလို့ရဦးမှာပါ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က လေလံပွဲတစ်မှာတော့ Apple 1 ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ အထိပေးဝယ်သွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Apple ကထုတ်လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ဒီဇိုင်းဟာရိုးရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်က Apple 1 ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် အဲဒီကတည်းပဲဆိုတာ သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရတာက အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားသွားသယ်သွားလို့ရနေတဲ့ portable ကွန်ပျူတာတွေ။ ဘယ်သူမှာတော့ ဒီကွန်ပျူတာတွေကို ကုန်တင်ကားကြီးပေါ်တင်ပြီး သွားချင်မလဲ။ ဒီအတွက် ပထမဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာကတော့ Osborne Computer Corporation က Osborne 1 Portable Computer ပါ။ ၂၃.၅ ပေါင်လေးပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၉၅ တန်တဲ့ protable ကွန်ပျူတာတွေကို ၁၉၈၁ ဧပြီလမှာဈေးကွက်ထဲစတင်ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကွန်ပျူတာတွေသုံးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပါဝါကတော့ ပြင်ပကတော့လိုအပ်နေဆဲပါ။ မီးမလာ၊ ပလပ်ပေါက်မရှိရင် သုံးလို့မရတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီ ကွန်ပျုတာက portable ပီပီ ရုပ်မြင်ဖန်သားပြင်ကတော့တစ်ခါထဲပါလားပြီးသားပါ။ ၈.၇၅ အကျယ်နဲ့ ၆.၆ အနံ ပါတဲ့။ လက်မ မဟုတ်ပါဘူး။ စင်တီမီတာပါ။ အဲဒီ ဖန်သားပြင်က အချက်အလက်တိုင်ပေါင်း ၁၃ဂ ခုပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေးသယ်လွန်းတဲ့ ဖန်သားပြင်က ၅၂ တိုင်ပဲပြနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၇၆ တိုင်ကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ အသုံးပြုသူက cursor key ကိုရွေ့ပေးရပါတယ်။ အင်း..အဲဒီတုန်းကသာ cursor key သာမရှိသေးရင် ဒုက္ခ။
Early Development of the United States Defensive Missile System by Raul ColonOn Guard! The Story of SAGE
Computer Technology: NEAC 2203, 1960
နောက်အချိန်ရရင် ရှေးရှေးတုန်းက website တွေအကြောင်းရေးပါဦးမယ်။
#IT #Computer #KnowledgeSharing
Here's an another turn...
Satellite navigation system - 2
Satellite navigation systems - 1
Adam,Eve and Pandora box
​® 2016 by Wai Lin Ko.
©Wai Lin Ko